पत्रपत्रिका « Online Tv Nepal
कोरोना संक्रमित सबै निको हुने क्रममा !
नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका नौं जनामध्ये आठ जनाको स्वास्थ्य अवस्था ‘सुधारोन्मुख’ हुँदै गएको छ । एक जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किसकेका छन् । संक्रमित उपचाररत अस्पतालका चिकित्सकले कोरोना संक्रमण भएकाहरु निको हुने क्रममा रहेकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । चिकित्सकले पर्याप्त सतर्कता अपनाउन भने सबैमा आग्रह गरेका
होसियार : डरलाग्दो नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको उच्च जोखिम !
नेपाल भ्रमण वर्ष, २०२० को सुरुवातसँगै नेपाल कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा परेको छ। छिमेकी मुलुक चीनमा फैलिएको कोरोना भाइरस पर्यटकमार्फत नेपाल पनि भित्रिन सक्ने उच्च सम्भावना रहेको तर सरकारले रोकथामका लागि पूर्वतयारी नगरेको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा
अब होसियार: ट्राफिक नियम उल्लंघन गरे एक लाख जरिवाना
काठमाडौं – सरकारले सवारी नियम उल्लंघनका घटनामा कमी गराउन भन्दै नियम उल्लंघन गर्नेलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ। हाल सवारी नियम मिच्नेलाई न्युनतम ५०० र अधिकतम पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गराउने प्रावधान छ। सरकारले अब न्युनतम दुई हजार र अधिकतम एक लाख रुपैयाँसम्म पुर्‍याउने तयारी गरेको
नेपालको शिर उच्च राख्ने पशुपतिनाथ मन्दिर संकटमा ! पुरा पढ्नुहोस र शेयर गर्नुहोस
पशुपतिनाथ मन्दिरको काठ कुहिएको छ। तीनतले मन्दिरको बीचको तलाका केही काठ कुहिएको हो। आँखीझ्याल अड्याउने फ्रेम कुहिएको हो। ‘बीच तलामा रहेका आँखीझ्याल अड्याउने नौ फिटका केही काठ कुहिएको छ’, श्रीपशुपतिनाथ मन्दिर अध्ययन समितिका सदस्य प्रेमहरि ढुंगानाले अन्नपूर्णसँग भने, ‘कुहिएको काठको नमुना निकालिएको छ। त्यसलाई पुरातत्त्व विभागको रासायनिक प्रयोगशालामा परीक्षण गर्ने
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लङ्घन गर्दै भारत, नेपालमा बरामद भएको अवैध वस्तु फिर्ता लान मानेन !
नेपाल प्रहरीले बरामद गरेको ठुलो मात्राको रक्तचन्दन भारतले फिर्ता नलिएछि त्यसको व्यवस्थापन गर्न नेपाललाई समस्या परेको छ । प्रहरी र वन विभागले लगभग १ लाख ५० हजार किलो रक्तचन्दनको सुरक्षा र व्यवस्थापनमा करोडौँ खर्च भइरहेको छ । अवैध तरिकाले भित्रिएका रक्तचन्दन समातिएपछि सम्बन्धित देशमै फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यसैअनुसार
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफूसँग आफैँलाई माफी दिने पूर्णअधिकार भएको दाबी गर्नुभएको छ । यो कार्यकारी अधिकारीको असाधारण उन्मुक्त दृष्टिकोण हो, जुन अधिक मात्रामा अदालतमा परीक्षण भएको छैन । यसले हाल उहाँमाथि अनुसन्धान गरिरहेका अभियोक्तासँग उहाँको सङ्घर्षलाई अझै लम्ब्याउन सक्ने सङ्केत दिएको छ । त्यसै पनि माफीको आवश्यकता छैन, किनभने ‘‘मैले
कांग्रेसको अनुशासन समिति निष्क्रिय
स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नै पार्टीका नेतालाई हराउन भूमिका खेलेको आरोप लागेका अन्तर्घातीलाई कारबाही गर्न बनेको कांग्रेसको अनुशासन समिति निष्क्रिय भएको छ । ०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि केन्द्रीय सदस्य सुजाता कोइराला, अमरेशकुमार सिंहसहितका २८३ जना नेता कार्यकर्तालाई कारबाही गरेको अनुशासन समितिले १० महिनाअघि अनुशासन उल्लंघन गर्नेमाथि छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाए पनि
मनलाग्दी भाडा लिने डेढ सय ट्याक्सीमाथि कारबाही
सरकारले ट्याक्सीमा जडित मिटरमा कैफियत भेटिएका १ सय ५० वटा ट्याक्सीलाई कारवाही गरेको छ । वितेको दुई महिनामा ती ट्याक्सीबाट जरीवानास्वरुप १ लाख ५० हजार रुपियाँ राजस्व संकलन भएको गुणस्तर तथा नाप तौल विभागले जनाएको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार अहिले उपत्यकामा भाडाका १० हजार ६ सय ३८ वटा ट्याक्सी गुड्दै आएका छन्
सुन तस्करी प्रकरण : एसएसपी खत्री छुटे कि छुटाईएका थिए ?
जिल्ला अदालत कोठामाडौंले पर्याप्त प्रमाण,आधार र विषयवस्तु केलाउन नसक्दा सुन तस्करीमा जोडिएको एसएसपी श्यामबहादुर खत्री धरौटीमा छुटेर पुरानै धन्दामा सक्रिय भएको खुलेको छ । गत बर्ष साढे ३३ किलो सुन बरामद प्रकरणमा मुछिएका खत्रीलाई न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारकिो ईजालासले वस्तुगत स्वतन्त्र प्रमाणको अभाव देखाउँदै २ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडेको थियो ।
भुकम्पबाट अति प्रभावित ४ जिल्लामा नेपाल टेलिकमले निःशुल्क ईन्टरनेट सेवा सुरु गरेको छ । टेलिकमले नेपाल दरसञ्चार प्राधिकरणसँग भएको समझौताअनुसार चार जिल्लाको ६ सय ७५ स्थानमा निःशुल्क ईन्टरनेट सेवा सुरु गरेको हो । सिन्धुलीपाल्चोक, काभ्रे, नुवाकोट र रसुवाका सार्वजनिक संस्था तथा महत्वपुर्ण स्थानमा यस्तो सेवा सुरु गरिएको टेलिकमले जनाएको छ । आजको कान्तिपुरमा
चलचित्र ‘म यस्तो गीत गाउँछु २’को प्रदर्शन स्थगित गरिएको छ । यो चलचित्रको रिलिज मिति
कोटेश्वरमा टिपरको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु, पछाडि बस्ने गम्भीर